“Waxay noqon kartaa 30 kii daqiiqo ee ugu xumaa ee Real Ciyaarto”
HomeWararka Maanta“Waxay noqon kartaa 30 kii daqiiqo ee ugu xumaa ee Real Ciyaarto”
Ciyaaryahanka difaaca naadiga Real Madrid ee Dani Carvajal ayaa ka codsaday taageerayaasha kooxda inay iska cafiyaan una ballan qaaday inay dib u dagaal galli doonaan dedaalkooda oo dhana isugu geyn doonaan sidii aan kaalinta koobaad looga soo tuuri lahayn.
Dani Carvajal oo kamid ahaa xidigihii dhex taag-taagnaa ee daawanayay kulankii ceebta badani raacday ee ay Real Madrid 4-0 ka guuldarada ah kala kulantay kooxda ay sida weyn u ficiltamaan ee Atlético.
“Ugu horeyn, Waxaan jeclahay inaan taageerayaasha weydiisto cafis iyo na saamaxaan. Maanaan ahayn ciyaartan kuwo soo bandhigay qaab ciyaareed fiican waana inaanu hambalyeynaa [Atlético] maxaa yeelay dhinaca fiican ayay ahaayeen. Waxa nala gudbooni waa inaanu ciyaartaas iska ilowno uun natiijadii naga luntayna si degdeg ah ee ugu macquulsan ugu soo ceshan lahayn.”
“Waxay noqon kartaa 30 kii daqiiqo ee Real ugu ciyaarta xumayd abid, iyadoo bixisay fursado isla markaana aan iyadu waxba abuurin.”
“Waa degdeg haddii aan qiimeeyo sidii wax u dhaceen ciyaarta dhexdeeda, oo wali waanu cadhaysanahay, laakiin runtu waa natiijada xaqiiqdii waxaanu dareemaynaa kuwo madaxooga hoos la geeyey.”
Isagoo ka hadlaya sida ay u dareemayaan natiijada 4-0 ka ahayd ee la baday, wuxuu ku jawaabay: “Tani waxay ahayd ciyaar horyaalka ah, ee ma ahayn kulan is reeb reeb oo koobka ama Champion ka ah, laakiin hadana waa dhacdo xanuun badan. Sidii aan hore u idhina, waa inaanu u ilownaa sida ugu dhaqsaha badan leh.”
Miyaan la odhan karin awoodii caasimadu waxay u wareegtay Atletico.? – “Wali lamay wareegin. Waa run inay guusha la tageen dhawrkii darbi ee ugu dambeeyey, laakiin aynu sugno ilaa dhamaadka horyaalka oo eegno cida qaadata Horyaalnimada.”
Marcelo Malagu Ganaaxi Doonaa Jiqilkii Uu Messi Ku Dhuftay?
Usain Bolt Oo Ku Guuleystay Orodka 100m Ee Tartanka Anniversary Games
Mesut Ozil & Danny Welbeck Oo Arsenal Ka Caawiyay Inay Durduro Ku Dhaafto Aston Villa